R/W Kheyre Oo ku Wajahan Xudur iyo Amaanka Halkaasi oo la Adkeeyey – hareerley News
Covet 19: “Waxaan qabri u sii diyaarinayaa dadkii oo nool”
Golaha hose ee dowladda Britain ayaa isku diyaarinaya in fayraska Corona ay u dhintaan dad cusub oo isbitaalada u jiifa qeybta xaaladaha deg dega ah. Clive Kalber waxay kanisadda parish ee ku talla Cornwall ka codsaday inuu qodo qabriyo dheeri ah oo lagu aaso dadka u dhimanaya Coronavirus. “Waa shaqo ay tahay inaan sameyno, waxaa […]
Shaqaalaha shirkadda sameysa diyaaradaha ee Boeing ayaa sanadkii 2016 la sheegay in ay isu direen farriimo ku saabsan cillad ay ku arkeen diyaaradda nooca 737 Max oo ahayd noocii labada jeer galaaftay nolasha boqolaal qof. Dukumeentiyo qoraal ah oo shirkaddani Boeing ay ku wareejisay garyaqaannadeeda ayaa muujinayay in mid ka mid ah duuliyeyaasha diyaaraddaasi uu […]
Waqtiga dib loo furi doono duulimaadyada Soomaaliya Oo la shaaciyay
Waxaa Maanta garoonka Diyaaradaha Dulles International Airport ee waqooyiga gobolka Virginia ka dagay diyaarad siday qeyb ka mid ah dad shalay laga qaaday magaalada Muqdisho oo heysta dhalashada Mareykanka, Canada iyo qeybo Yurub ah. Dadkaasi oo Soomaali ah balse heysta dhalashada dalal kale ayaa Soomaaliya waxaa looga qaaday sababo la xiriira Cudurka Covid 19 oo […]